We.com.mm - အောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့အချက်(၉)ချက်
လူတိုင်းဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာကြမှာပါပဲ။ဘဝတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့လူတွေကိုကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။ ဘဝကိုပိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလာစေတဲ့လက်တွဲဖော်ကောင်း၊နွေးထွေးပြီးစိတ်လုံခြုံမှုပေးနိုင်တဲ့မိသားစု၊ရင်ဖွင့် စရာသူငယ်ချင်းကောင်းတွေကြောင့်ပျော်ရွှင်ရသလို သင့်အပေါ်မကောင်းတဲ့သူတွေကြောင့်လည်း စိတ်ညစ်စရာတွေကြုံခဲ့ရဖူးမှာပါ။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အံ့သြစရာအတွေအကြုံအမျိုးမျိုးတွေရရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီနေ့မှာကောင်းကောင်းရပ်တည်နေနိုင်တာပါ။မင်မင်အနေနဲ့လည်း ဘဝမှာနေပျော်လာဖို့အကြံပေးချင်တဲ့အချက်လေးတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့…
ရှုံးနိမ့်မှုဆိုတာ ကြားရယုံနဲ့တင်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့စကားလုံးတစ်ခုပါ။ လူတိုင်းလိုလိုဟာရှုံးနိမ့်မှုကို ရင်မဆိုင်လိုကြဘူး။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ပါနဲ့။ ရှုံးနိမ့်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ရခြင်းဟာ တကယ်အနှစ်သာရရှိတဲ့ အရာတစ်ခုလို့ပြောပါရစေ။သင့်ရဲ့လူမှုရေးရာ၊ပညာရေး၊အလုပ်အကိုင် စတာတွေမှာမအောင်မြင်ဘူးဆိုရင် အဲ့ဒီအခြေအနေကိုလက်ခံလိုက်ပါ။ အချိန်ယူပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါ အနားပေးလိုက်ပါ။ပြီးရင်တော့ ကိုယ်ဘာတွေလိုအပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်သုံးသပ်ပါ။ ကိုယ့်မှာရှိနေတဲ့ အားနည်းချက်တွေကို ဖြည့်သွားရင်နဲ့ အောင်မြင်မှုကိုသင်ဆုပ်ကိုင်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ဖို့ရာလွယ်ကူတာမှမဟုတ်တာပဲ။ဒါကြောင့် သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေ အားနည်းချက်တွေ ကိုသူစိမ်းတွေကဝေဖန်လာရင်ပြုံးနေလိုက်ပါ။သင့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ကိုယ်ကိုတိုင်လက်ခံနိုင်ပြီဆိုရင် ဘယ်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ စိတ်ခံစားမှုဖြစ်အောင် မထိုးနှက်နိုင်တော့ပါဘူး။
လူတွေတိုင်းမှာလိုအင်ဆန္ဒတွေကအမြဲတမ်းရှိနေနိုင်မှာပါ။ဝိတ်လျှော့ချင်ရင် အစားအစာ၊လေ့ကျင့်ခန်းတွေနဲ့ ပက်သက်ပြီးသင်ယူရမယ်။ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ်မှာ ပိုတိုးတက်ချင်ရင် ကျွမ်းကျင်လာအောင်လေ့လာရမယ်။သင့်အနေနဲ့ ဘာမှမသင်ယူဖူးဆိုရင် တိုးတက်မှုမြန်ဆန်တဲ့ဒီနေ့လိုခေတ်မှာနောက်ကောက်ကျနေခဲ့နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခြားသူတွေနဲ့သင်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ရင် ကိုယ်ပိုင်အချိန်အားလပ်ခြင်း၊ဝါသနာ၊အကြိုက် စသဖြင့်မတူတာတွေအများကြီးပါ။အားနာပါးနာနဲ့ သူများအကြိုက်အမြဲတမ်းလိုက်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာ မလွယ်ကူပါဘူး။သင်မကြိုက်ဖူးဆိုရင် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့သာငြင်းလိုက်ပါ။အနည်းဆုံးတော့ စိတ်မသက်မသာနဲ့ မလုပ်ချင်တာကိုမလုပ်ရတော့ဘူးလေ။
ငွေကြေးဟာအရေးမကြီးဘူးလို့ပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ငွေကြေးကတော့ အမြဲတမ်းအသုံးဝင်တဲ့ အရာတစ်ခုပါ။သင့်အလုပ်ကဝင်ငွေများလာလေ တာဝန်ယူမှုတွေ ပိုများလာလေလေပါပဲ။အဲ့ဒီ အတွက်လည်းစိတ်ဖိစီးမှုတွေတစ်ပါတည်းပါလာမှာပါ။ပိုချမ်းသာလာလို့ လူနေမှုအဆင့်အတန်း ပိုမြင့်လာတာကတော့ကောင်းပါတယ်။သင့်ရဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းနဲ့ ကိုက်ညီအောင် ငွေကြေးကိုတော့ထပ်ရှာနေရဦးမှာပါပဲ။
ကိစ္စရပ်တော်တော်များများကတော့ လူတွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းခွင်၊ မိသားစုဘဝ၊အပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအခြေအနေတွေချည်းကုန်ဆုံးဖိုကတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ အဆင်ပြေပြေပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပါပဲ။အနည်းဆုံးတော့ သင်စိတ်ချမ်းသာရမှာပါ။
ပြောင်းလဲတိုးတက်မှုမြန်ဆန်နေတဲ့ခေတ်ကြီးမှာ အသစ်အသစ်တွေကတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာပါပဲ။ သင့်မှာလည်းလိုအပ်ချက် အသစ်တွေအမြဲတမ်းဖြစ်ပေါ်လာမှာပါပဲလေ။အဲ့ဒီအတွက်လည်း အမြဲတမ်းကြိုးစားနေရဖို့ရှိမှာပါ။အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်သင်လည်းလိုက်ပါပြောင်းလဲရမှာပါ။
ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ချင်ရင်အဆိုးမြင်သမားတွေကိုရှောင်လိုက်ပါ။သူတို့ဆီက စိတ်ပင်ပန်းစရာစိတ်ညစ်ညူးစရာတွေသာရနိုင်တာမို့ သူတို့နဲ့တွေ့ရင်သင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလေးတွေတောင် ပျက်သုဉ်းသွားနိုင်ပါတယ်။သင်ရောပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်မနေချင်ဘူးလား???
ရယူပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့လောဘစိတ်ဟာ ပူလောင်မှုကိုပဲပေးတာပါ။ သင့်မှာရှိတဲ့အရာတွေကို မျှဝေတာဖြစ်ဖြစ် သူတစ်ပါးရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုယ်ချင်းစာနားလည် ပေးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ပိုမိုစိတ်ချမ်းသာစေမှာအမှန်ပါပဲ။တတ်နိုင်သမျှစွန့်လွတ်ပေးကမ်းနိုင်လာလေလေ ပီတိတွေနဲ့ ဘဝဟာကျေနပ်စရာကောင်းလေလေပါပဲ။
မိန်းမတစ်ယောက်ရဲ့ ထက်မြက်မှုဆိုတဲ့ အရည်အချင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ
ကမ္ဘာ့အသက်အကြီးဆုံး ကျွမ်းဘားမယ်ဖြစ်လာသူ Johanna Quaas
ပျင်းနေရင် ဒီ (၁၄ ) ချက်နဲ့ ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ
သူတို့တွေ ဘာလုပ်လို့အောင်မြင်ကြတာလဲ ?
ဒေါသကိုချူပ်ထိန်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း ၄ ချက်
ယနေ့မှာ သြင်္ဂိုလ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့ မစိမ့်ထက်ရဲ့ ဈာပနမြင်ကွင်း
သင့်ဖုန်းကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ Application (၈) မျိုး